I-Raw (R) -Oxiracetam Powder (68252-28-8) Abavelisi-Phcoker
Disemba 28, 2018
I-Raw (R) -Oxiracetam powder (igama lekhowudi yophuhliso i-ISF 2522) sisiyobisi se-nootropic sosapho lwe-racetam kwaye inobulali kakhulu …….
Amandla: 1420kg / inyanga
I-Raw (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) ividiyo
I-Raw (R) -Oxiracetam powder yiyona (R) -inantiomere ye-oxiracetam ye-nootropic drug. I-Oxiracetam (i-ISF 2522) isicatshulwa se-nootropic sentsapho ye-racetam kwaye ivuselela. Ixabiso le-IC50: Iithagethi: I-oxiracetam ye-nootropic (ISF 2522) isicatshulwa se-nootropic sentsapho ye-racetam kwaye ivuselela.   Izifundo ezininzi zezilwanyana zibonisa ukuba le nto ikhuselekile nangona iqondo eliphezulu lidliwe ixesha elide . [ucatshulwa olufunekayo] Nangona kunjalo, indlela yokusebenza yentsapho yamayeza e-racetam isengomcimbi wophando. I-Oxiracetam ayivunywanga nguLawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweeDrama kwanaluphi na uhlobo lwezobisi kwi-United States.
I-Raw (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw (R) -Oxiracetam powder
Igama leKhemikhali Raw (R)-Oxiracetam powder;68252-28-8; (R)-2-(4-HYDROXY-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETAMIDE;
Igama lebrand Akukho datha ekhoyo
Iqela leziyobisi Akukho datha ekhoyo
Inani leCAS 68252-28-8
I molecular Fi-ormula C6H10N2O3
I molecular WSibhozo 158.16
IMasaisotopic Mass 158.069 g / mol
Ukuxuba Point Akukho datha ekhoyo
Point yo kubilisa 494.6 ° C kwi-760 mmHg
Sukufaneleka Isisombululo kwiDMSO
Sisibetho Tukushisa Okomileyo, omnyama kunye no-0 ukuya ku-4 C okwexesha elifutshane (iintsuku ukuya kwiiveki) okanye -20 C ixesha elide (iinyanga ukuya kwiminyaka).
Aukuguquka Enantiometer (O846905) enantiomeri enamandla angaphantsi nje nge-nootropic kune-enantiomeri yayo (-) -S.
ekrwada (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Inkcazelo
I-Raw (R) -Oxiracetam powder yiyona (R) -inantiomere ye-oxiracetam ye-nootropic drug. I-Oxiracetam (i-ISF 2522) isicatshulwa se-nootropic sentsapho ye-racetam kwaye ivuselela. Ixabiso le-IC50: Iithagethi: I-oxiracetam ye-nootropic (ISF 2522) isicatshulwa se-nootropic sentsapho ye-racetam kwaye ivuselela.   Izifundo ezininzi zezilwanyana zibonisa ukuba le nto ikhuselekile nangona iqondo eliphezulu lidliwe ixesha elide . [ucatshulwa olufunekayo] Nangona kunjalo, indlela yokusebenza yentsapho yamayeza e-racetam isengomcimbi wophando. I-Oxiracetam ayivunywanga nguLawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweeDrama kwanaluphi na uhlobo lwezobisi kwi-United States
(R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Indlela yokuSebenza
(R) -oxiracetam, yayisisithako esisebenzayo esanciphisa ukungonakali kokufunda kwendawo kunye nememori ngokuphucula umonakalo we-neuron kunye nemilonda yamhlophe, ukwandisa ukuhamba kwegazi, kunye nokuvimbela ukusebenziswa kwe-astrocyte kuma-rats angapheliyo angama-cerebral hypoperfused.
benefits of (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8)
Ukugxila kunye nokugxila
Ubumnene obukhuthazayo nokukhuthaza ukuvuka
kucetyiswa (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Isistim
Umyinge we-oxiracetam ungaphantsi kwee-piracetam, kodwa oko akuthethi ixabiso elincinci liya kukwanela. Umlinganiselo oqhelekileyo uphakathi kwebala le-1200 mg kunye ne-2400 mg ithathwe ngaphantsi kwexesha, mhlawumbi kwixesha eli-2 ukuya kwintathu (spreadings) ye-400mg okanye i-800mg).
Imiphumela of (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8)
I-Oxiracetam ingabangela intloko. Ukukhipha intloko yesifo se-oxiracetam, yithatha isongezelelo se-choline njenge-alpha GPC okanye i-citicoline.
Ngenxa yokuba inezakhiwo ezinomfutho ococekileyo, i-oxiracetam inokuphazamisa ukujikeleza okuqhelekileyo xa kuthathwa ngokukhawuleza ngosuku.
Imiphumo emibi yokungazinzi kunye nokukhathazeka, ngelixa kunqabile, kuye kwabikwa ngezinye izihlandlo. Ezi ziphumo ziyakuthi ziphephe ngokuthatha i-oxiracetam ekuqaleni komhla okanye ukunciphisa umthamo.
I-Tianeptine powder eluhlaza (66981-73-5)
I-Raw Tianeptine i-hemisulfate i-monohydrate powder (i-1224690-84-9)